Caa'isha - Wikipedia
Caisha Kani waa maqaal ku saabsan Ca'isha bint Abi Bakr, ha ku khaldin Magaca Caasha ee dumarka Islaamku la baxaan.
Caaisha, Caasha, Caisha, Caayisha (ingiriis: Aisha, ‘Ā’ishah bint Abī Bakr, "Caaisha"; carabi: ﻋﺎﺋﺸﺔ, Ayesha, Caayisha, A'isha, Ca'isha, Aishat, Caisha, Aishah, Caishah, ama Aisha, Caisha) loo yaqaano hooyada Mu'miniinta [ﺃﻡ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ] waa mid ka mid ah xaasaskii Nebi Muxamed (n.n.k,h). Ca'isha waxaa dhalay nebiga saaxiibkiis iyo asxaabi Khaliif ar-Raashid Abu Baker al-sadiiq.
Maryama al-Qibtiyya waxay ahayd adoon laga soo diray wadanka Masar hadiyad ahaan ku soo gaadhay nebiga. Wuu xoreeyay ka dibna uu guursadey.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Caa%27isha&oldid=221687"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 26 Oktoobar 2021, marka ee eheed 21:37.